HARGEYSA(P-TIMES) –Warar soo baxaya maalmihii u dambeeyey ayaa sheegaya in xubno iskugu jira Odayaal dhaqan iyo Xisbiyada mucaaradka qaarkood ay doonayaan in ay ka qeybgalaan caleema-Saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo horey loo shaaciyey in uu dhacayo dhamaadka bishan September 2019, ka dib doorashadiisii ka dhacday Kismaayo.
Qaar kamid ah Siyaasiinta falanqeeya arrimaha siyaasadda Somaliland eekusugan magaalada Hargeysa ayaa uga digay dhinacyada abaabulaya ka qeybgalka Caleema-Saarkaas in ay tahay in ay ka joogsadaan.
Xukuumadda ayay ugu baaqeen in ay fiiro gaar ah u yeelato arrimaha ku wajahan dhacdadan oo ay sheegeen in ay tahay mid halis galinaysa maqaamka Somaliland.
Gudoomiye kuxigeenkii hore ee Xisbiga UCID Cabdinaasir Buuni oo wariyayaasha kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in ay jiraan dad badan oo qabanqaabinaya in ay Dad Somaliland u dhashay geeyaan magaalada Kismaayo.
Mr, Buuni ayaa sheegay in uu arrimahaas ka shaqeynayo wakiilka Somaliland u jooga dalka Kenya, arrintaas oo uu sheegay in ay magac dil kutahay maamulkooda oo sheegta in ay ka goosteen Soomaaliya sannadkii 1991-dii.
Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha Xisbiga UCID ayaa dhawaan sheegay in uu ka qeybgalayo haddii Daruufto saamaxdo Caleema-Saarka Axmed Madoobe, waxaana wararku sheegayaan in ay Jubbaland aqbashay kaqeybgalkiisa.